Tombontsoa 5 Ny varotra mailaka dia manana ny fizotran'ny marketing mahazatra | Martech Zone
Rehefa nitombo ny habeny sy ny sakany, nanjary nanana olana bebe kokoa izy ireo. Fikambanana lehibe iray dia mety hamoaka ampahefatry ny volana miaraka amin'ireo mpandraharaha an-jatony manoratra andalana kaody an'arivony izay niasa tsara teo an-toerana, saingy niteraka aretin'andoha sy fifandonana tany ambanin'ny toky. Ireo fifandonana ireo dia nety ho nesorina ireo fisehoan-javatra, fanemorana ny famotsorana, ary fihaonana etsy sy eroa ny fibaikoana hanandrana sy hanala ireo barazy. Ny metodolojia mailamailaka dia nanolotra fomba hafa, amin'ny alàlan'ny ekipa fiaraha-miasa sy matanjaka mba hitondra valiny maharitra amin'ny alàlan'ny andiana sprints.
Ny paikady marketing androany dia mitaky ny fivezivezena amin'ny orinasa an dia mailaka mailaka hahazoana antoka fa ny paikadim-pandaharana omni-channel dia mahatratra ny tanjon'ny fikambanana. Ka ny fizotrany izay nanampy tamin'ny fampivoarana sy ny fanafainganana ny fampandrosoana ny orinasa dia nampiharina tamin'ny ekipa marketing. Amin'ity infographic avy amin'ny CMG Partners ity dia manondro izy ireo Agile Marketing ho rafitra fiasa vaovao ho an'ny Marketing.
Tombontsoa amin'ny varotra mailaka
Manao asa mety - Ireo mpivarotra dia mifantoka amin'izay ilain'ny mpanjifa fa tsy ny fizotrany anatiny, lova ary hierarchical izay mitohy hatrany.
Manatanteraka amin'ny fotoana mety - amin'ny fanafoanana ny tsingerina sy ny fanaovana laharam-pahamehana ny fanentanana sy ny ezaka, ny mpivarotra dia afaka mamaly haingana kokoa ny filan'ny mpanjifa.
Fanatrarana ny olona mety - ekipa fiaraha-miasa sy paikady mavitrika dia mikendry ny mpanjifa mety miaraka amin'ny hafatra mety amin'ny fotoana mety.
Mahazo valiny misy vokany - Ny fanapotehana ny fizotran'ny silo sy ny fanamorana dia manome antoka fa azo alefa tsara ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny fivezivezena sy ny valiny.
Manatsara sy manatsara - ny tsingerina miverimberina dia manome antoka fa ny lesona nianarana tamin'ny sprint farany dia ampiharina amin'ny manaraka, manatsara hatrany ny ROI marketing.
Ity misy famafana ny fomba fiasan'ny ankamaroan'ny ekipa marketing sy ny fomba fiasan'ny mpivarotra mailaka.
Tags: andraikitramailakamarketing marketingfomba hainganacross-Functionalfifantohan'ny mpanjifafanandramanaambaratongammiverimberinafianarana hainganamampidi-dozavarotra nentim-paharazanariandrano
Dell EMC World: 10 Terms Manova Teknolojia Fampahalalana